Port-Portuguese - iwayini amatilosi ukuze sinqobe izwe
Umlando port Portuguese elisuka mists isikhathi. I izivini wokuqala kule Douro esigodini otshalwe ngasemanzini amaRoma ekuqaleni ezitholakala kule nkathi yethu. ayizinkulungwane 250 amahektha izivini manje matasa amahektha ayizinkulungwane 42 esigodini endawni lamagilebhisi. Isigodi sinendawo omkhulu - ezintabeni ezizungezile ungavumeli emoyeni abandayo, futhi schist inhlabathi ekahle kakhulu yokutshala izivini.
IsiPutukezi port iwayini kwaduma England, bese - nasemhlabeni wonke, ngibonga esinye ukuxabana iBrithani neFrance ekupheleni kwekhulu XVII. French isikhonzi Colbert uvinjelwe ukuthekelisa iwayini French eNgilandi. Futhi amehlo iwayini abathengisi British waphendukela eningizimu, esigodini eMfuleni Douro. ESpain, umfula ubizwa ngokuthi Douro ePortugal - Douro futhi Douro.
ENgilandi nasePortugal kwase eminyaka ubudala ukuhweba link. Edolobheni Emaphethelweni yezitolo Porto, Vila Nova de Gala, sekuyisikhathi eside ixazululwe ukumelwa izinkampani zokuhweba British, kwakukhona newayini labo emafektri. iwayini Portuguese abaye babuthwa ngomfula Porto. Ngasekuqaleni kwekhulu le-17 e Porto imakethwa amacala abangaphezu kwesigidi iwayini ngonyaka.
Ngakho, emehlweni waphendukela lesigodi esivundile nomuzi Porto, okuyinto yenza ufaneleke umzamo igama layo, ngempela matasa port. Kodwa iwayini, okungase banikeze isiPutukezi England, sisebancane futhi beya, okumuncu endleleni.
Njengoba kwenzeka - Umlando bathulile. Ngokusho kwenye nguqulo othile ohlakaniphile necebo umbono ukwengeza iwayini brandy. Brandy ayivunyelwe ukuze ujike iwayini elimuncu, futhi ezinye ushukela akazange abe nesikhathi ibe utshwala, ukuhlinzeka iwayini noshukela. Ngokusho kwenye i-version, wesigodlo isiPutukezi we Isigodlo, esemgwaqweni Awukude esigodini, oselaphe lezihambi esiNgisi amabili i iwayini elimnandi kakhulu. AmaNgisi babenesithakazelo. Futhi kwathi uBaba Ongcwele ukungezwa iwayini utshwala nogologo.
Futhi wayedabuka port Portuguese - yizicukuthwane amnandi iwayini enezivikelo eziqinile. Ekuqaleni, senziwa ngaleyo ndlela - e kokuqendwa iwayini umoya yamagilebhisi wanezela. Kodwa-ke, i-ezifanele zobuchwepheshe. Manje engeza utshwala lapho isibilile okungenani isigamu ushukela eziqukethwe juice kwamagilebhisi. I ngaphambili yengezwe notshwala, imnandi iwayini Kuyophumela ethubeni. Izinga eliphakeme kunawo kwamagilebhisi utshwala yengezwe ngo a Ingxenye 1: 4.
Iwayini libizwa ngendlela ehlukile. Imbobo isiPutukezi, Porto, iwayini Oporto, ichweba iwayini - kule isiphuzo yizicukuthwane ayenamagama eziningi. Ekugcineni, ichweba isiPutukezi atholwe igama layo ngo 1756. OwayenguNgqongqoshe Marquis de Pombal wathatha engakaze yenziwe sikhathi, ukuze kuvikeleke port ngokumelene mbumbulu izinyathelo. ecacile emngceleni esifundeni, lapho port kuvunyelwe aye atholakala. Kuze kube namuhla, ngakho - iwayini kusukela esigodini Douro kuphela kungenziwa ngokuthi "isiPutukezi port iwayini."
Futhi Marquis isinqumo sokuthi wonke port kungenziwa bevalela kuphela emadolobheni asemaphethelweni Porto, Vila Nova de Gaia. Kusukela ngaleso sikhathi, yonke imithombo mnogolitrovye oki imiphongolo ka isibilile juice kwamagilebhisi ziyiswa e Vila Nova de Gaia. Port iwayini kugcinwa emgqonyeni eminyakeni embalwa ke kwathiwa ezihlangene, okusho ezihlangene kanye asemabhodleleni.
Imbobo Portuguese ukhiqiza ezihlukahlukene zezinto eziphilayo. The main wabo - yilokho ezintathu.
Ruby - Ruby - ifomu eshibhe kunazo port, ijubane layo uma igijima akuyona engaphansi kwemithathu kodwa hhayi iminyaka engaphezu kwengu-10 kule emgqonyeni.
Tony - tan - ngaphezulu ifomu ezibizayo, kuba asebekhulile imiphongolo ezingengaphansi kwezingama-10 kodwa hhayi iminyaka engaphezu kwengu-20. Khona-ke kuba kakhulu efana ukunambitheka kotshwala. ENgilandi nasePortugal kukhona ngokwezifiso ophuzisa iningi ingane iwayini port, elenziwe ngamagilebhisi kuvuna ngonyaka lokuzalwa lokuzalwa. Lena - ezihlukahlukene kuphela imbobo iwayini, wakhonza ebandayo ukuze degrees 12.
Vintage - Old - ukuvuthwa e amabhodlela. Lokhu iwayini akusho ziwohloka nge sikhathi, kodwa kuthuthukisa isixha yayo futhi eqala ukunambitheka esiyingqayizivele. Lena utshalomali omuhle capital - ngokuhamba kwesikhathi le-port kuba ezibizayo kuphela ngaphezulu.
Corks ngoba amabhodlela port iwayini Yenziwe ukwaziswa okufanayo we-Portuguese - Portuguese kwesihlahla se-okhi amagxolo. On ngamunye ngesivalo ingcina izitembu National Institute of Douro iwayini, ukuze ugweme elinegazi.
Port iwayini, noma kunalokho, iwayini ukuthi kukhiqizwa nge ubuchwepheshe obufanayo, nokwenza kwamanye amazwe kanye nezifunda, ezifana eNingizimu Afrika. I-Russian port Portuguese akuyona ethandwa kakhulu ngenxa yezindleko yaso ephezulu nzima, kodwa yaziwa kabanzi eliphezulu port iwayini Massandra, Koktebel, Magaracha Inkerman. Nakuba Yiqiniso, hhayi emzini Porto noma Douro River Valley, kungukuthi ehlobene. Kodwa igama wanamathela ngokomlando.
Kukhona ngisho iqembu iwayini ezidume kube yilolu suku ezweni elaliyiSoviet Union, ezifana ne-port 777 noma port Agdam. Baziwa ngaphansi mbumbulu collective "tangle-imilenze" futhi-ke, abanalo maqondana isiphuzo yizicukuthwane "isiPutukezi port iwayini."
Pepper vodka - amaphilisi utshwala, vodka, ku moonshine
Zinc wamafutha umbimbi: ukubuyekezwa, ukwakheka, isenzo, intengo